Tenona Wire harato, Stainless Steel Wire harato - DXR
Tenona Wire harato
Hanivana Wire harato
Zavatra manenona Wire harato
Black Wire Lamba
Wire harato varahina
Copper Wire harato
Nandrisika Wire harato
Plain Steel Wire harato
DXR Wire harato dia mpanamboatra & raharaham-barotra combo ny tariby volovolo sy lamba tariby any Shina. Miaraka amin'ny lalana rakitsoratry ny 30 taona mahery ny raharaham-barotra sy ara-teknika amin'ny tehina varotra nandritra ny 30 taona mahery mitambatra traikefa.
DXR marika malaza toy ny marika ao amin'ny faritanin'i Hebei dia voasoratra tamin'ny 7 firenena manerana izao tontolo izao ho an'ny amantarana fiarovana. Amin'izao fotoana izao, DXR Wire harato dia iray amin'ireo fifaninanana indrindra mpanamboatra harato vy tariby any Asia.
Stainless Steel Wire harato ny fanantenana
Ny vokatra ny Stainless vy tariby harato orinasa mihatra amin'ny Shina, dia manarona izao tontolo izao. Io karazana vokatra any Shina no tena aondrana ny United ...
Ahoana no Hifidianana High Quality Stainless Steel Wire harato Manufacturers
Fa ny Stainless vy tariby harato mpividy, isan'andro, dia handray ana hetsiny ny taratasy ny fampandrosoana. Ao amin'ny taratasy maro fampandrosoana, ny fomba hanaovana safidy faran'izay tsara mpanamboatra no olana mampahory. Voalohany, mifanatrika. Esory ny mpivarotra. Diniho ny mpivarotra tsy misy orinasa. Izany dia hanaisotra ny ankamaroan'ny mpivarotra, fa ny ...
Ahoana no mba hizaha toetra ny Hatsaran-Nohafarana Stainless Steel Wire harato
Tsy misy fahadisoana ara-nofo, indrindra hita taratra eo amin'ny votoatin'ny nikela, Stainless vy, nikela afa-po, ohatra 304 dia 8% -10%, fa ao Shina, 304 Stainless vy nikela afa-po ny 8%, 9%, na raha tianao 10% nikela votoaty Stainless vy harato, mila toromarika manokana. Wire savaivony tsy misy fahadisoana, misy mpamatsy vidiny mirary indrindra, à l'...
NO.18, Jing Si lalana, Anping Industrial Park, Hebei Province, Sina.
Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na pricelist, Masìna ianao, avelao ny mailaka ho anay izahay, dia ho nifandray tamin'i tamin'ny 24 ora.
Stainless Steel Hardware Cloth, Plain tenona Wire harato , Nandrisika Wire harato, Stainless Steel harato Lamba , Plain Steel Wire Lamba , Wire harato Stainless Steel ,